Ahoana ny fampiasan'ny mpivarotra mailaka ny fanadihadiana mialoha hanatsarana ny vokatra e-varotra | Martech Zone
Ahoana ny fomba ampiasan'ny mpivarotra mailaka ny fanadihadiana mialoha hanatsarana ny vokatra e-varotra
Zoma, Febroary 25, 2022 Zoma, Febroary 25, 2022 Prasanna Chitanand
Ny fisehoan'ny vinavina Analytics amin'ny marketing mailaka dia lasa malaza, indrindra amin'ny indostrian'ny ecommerce. Ny fampiasana ny teknolojia ara-barotra vinavina dia manana fahafahana hanatsara ny tanjona, ny fotoana ary amin'ny farany mamadika orinasa bebe kokoa amin'ny alàlan'ny mailaka. Ity teknôlôjia ity dia mitana anjara toerana lehibe amin'ny famantarana ny vokatra mety hovidin'ny mpanjifanao, ny fotoana mety hividianany azy, ary ny atiny manokana izay hitarika ny hetsika.
vinavina -barotra dia tetika mampiasa angona momba ny fitondran-tena taloha mba haminavina ara-statistika ny fitondran-tena ho avy. Ny angona, ny famakafakana ary ny teknika fandrefesana vinavina dia ampiasaina hamaritana hoe iza amin'ireo hetsika ara-barotra no mety hiova kokoa noho ny mombamomba ny mpanjifa sy ny fitondran-tena. Mitana anjara toerana lehibe amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra marani-tsaina izany data izany. Rehefa ampiharina amin'ny marketing amin'ny mailaka, ny algorithm dia afaka manampy anao hikendry ireo mpihaino mifandraika amin'izany, manatsara ny fifampiraharahana, manome fiovam-po bebe kokoa ary miteraka fidiram-bola bebe kokoa amin'ny fanentanana mailaka.
Inona no atao hoe Analytics Predictive?
vinavina Analytics dia dingana miompana amin'ny angona ampiasain'ny mpivarotra mba hahatakarana ny fifandraisan'ny mpanjifa tamin'ny fampielezan-kevitra teo aloha sy ny hetsika tranokala izay afaka maminavina ny fitondran-tena ho avy. Ny famakafakana vinavina dia manampy amin'ny famoronana fanentanana ara-barotra manokana sy mifandraika kokoa. HO AN'NY mailaka barotra matihanina, teboka angon-drakitra vinavina dia manome hevitra sy fahafahana ho an'ny fitondran-tenan'ny mpanjifa toy ny:
Mety hikorontana na tsy hisoratra anarana
Fotoana tsara indrindra amin'ny fividianana
Vokatra na sokajy vokatra mifandraika
Ny sandan'ny androm-piainan'ny mpanjifa (CLV)
Ity angon-drakitra ity dia afaka manampy anao amin'ny fanatanterahana tetika, fitsapana toe-javatra, na automatique ny fandefasana hafatra mety amin'ny fotoana mety indrindra. Ireto misy vinavina mety ilaina hanatsarana ny hafatra, ary handrefesana ny fahombiazan'ny mailaka amin'ny ankapobeny.
Fikasana mividy – Ny fahatakarana ny mety ho vidin'ny mpitsidika iray dia afaka manampy anao handroso sy hanatitra ny votoaty mety amin'ny hafatrao. Ireo mpitsidika manana haavo liana dia mety hiova fo, ary ny fitahirizana ny fihenam-bidy ho an'ny fifandraisana toy izany dia hampiakatra ny LTV.
Daty vinavinaina hividianana ho avy - Ny ESP midadasika sy be pitsiny kokoa dia manana fahafahana manangona ny fahazarana mividy amin'ny fifandraisana ary maminavina ny fotoana mety hametrahany ny baikon'izy ireo ho avy, ahafahanao mandefa mailaka mandeha ho azy miaraka amin'ny vokatra atolotra amin'ny fotoana mety.
Vokatra tiana na sokajy vokatra - Ny famantarana ny vokatra na ny sokajy vokatra tena tian'ny mpampiasa tsirairay dia ahafahanao mamokatra tsara kokoa ny mailakao miaraka amin'ny vokatra izay tian'izy ireo.
Vidin'ny mpanjifa antenaina mandritra ny androm-piainany (CLemV) – Amin'ny fijerena ny sanda manan-tantaran'ny mpanjifa iray, ny fahamaroan'ny fividianana azy, ary ny datin'ny fividianana indray, dia azo amboarina ny sandan'ny androm-piainany. Ity famakafakana ity dia manampy anao hahatakatra hoe iza amin'ireo mpanjifanao no mahatoky indrindra na mety hiova fo amin'ny sandan'ny kaomandy ambony kokoa (AOV).
Ny fampiharana ny famakafakana vinavina amin'ny fampielezan-kevitra momba ny varotra mailaka dia hahatonga ny fampielezanao ho tena manokana, mety ary ara-potoana - manatsara ny fidiram-bolanao.
Ahoana no mahazo vahana ny Predictive Analytics?
Na ny tsenan'ny analyse prescriptive sy predictive dia mitentina 10.01 tapitrisa dolara amin'ny taona 2020 ary vinavinaina hikasika $35.45 miliara amin'ny 2027, ary hitombo amin'ny taham-pitomboana isan-taona (CAGR) dia 21.9% eo anelanelan'ny 2020 ka hatramin'ny 2027.
Statistikan'ny tsenan'ny Predictive Analytics: 2027
Misy lafin-javatra maromaro mandrisika ny lazan'ny analyse vinavina.
Ny teknolojia fitehirizana dia tsy lafo ary azo esorina, ahafahan'ny fahafahana misambotra sy mamakafaka haingana ny terabytes angona.
Ny hafainganam-pandehan'ny fanodinana sy ny famatsiana fahatsiarovana amin'ny mpizara sy ny mpizara virtoaly (manerana ny mpizara) dia manome fahafahana hampiasa ny fitaovana hampandehanana toe-javatra saika tsy misy fetra haminavina ny angona.
Ny sehatra dia mampiditra ireo fitaovana ireo amin'ny taham-pahavitrihana lehibe ary manao ny teknolojia ho tsotra sy mora amin'ny orinasa antonony.
Ireo rehetra voalaza etsy ambony ireo dia manome fampiakarana lehibe amin'ny valin'ny fampielezan-kevitra ara-barotra, izay miteraka fiverenana haingana amin'ny fampiasam-bola amin'ny teknolojia (ROTI).
Fampiasana Predictive Analytics amin'ny Marketing Email
Raha ny momba ny marketing amin'ny mailaka, ny analytics predictive dia manohana ny mpanome tolotra mailaka an'ny fikambanana ary mampiditra ny fanekena ny fitondran-tena amin'ny fotoana tena izy miaraka amin'ny angon-drakitra mpanjifa taloha mba hamoronana fanentanana mailaka mandeha ho azy sy manokana. Ny tombony fanampiny dia ny fanampiana amin'ny fahazoana sy ny fananganana fifandraisana amin'ny fihazonana ny mpanjifa sy ny fampielezan-kevitra mailaka mandresy.
Ireto misy fomba 4 hanatsarana ny paikadin'ny fampielezan-kevitra amin'ny mailaka:
Mahazo mpanjifa vaovao - Amin'ny haino aman-jery hafa, ny fahafahana manao mombamomba sy mamantatra ny mpihaino mitovy dia fomba tsara indrindra amin'ny varotra ho an'ny mpanjifa mety. Ny ankamaroan'ny maotera dokam-barotra dia manana fahafahana manafatra adiresy mailaka mba hampisehoana ireo mpampiasa anao amin'ny demografika, ara-jeografika ary na dia mifototra amin'ny tombontsoany aza. Avy eo, io mombamomba io (na ny mombamomba) dia azo ampiasaina hanaovana dokam-barotra amin'ny mpanjifa mety misy tolotra hisoratra anarana amin'ny marketing mailaka anao.
Fampitomboana ny fiovam-po - Rehefa lasa mpanjifa voalohany mahazo mailaka fampiroboroboana avy amin'ny orinasa iray ny mpanjifa mety ho mpanjifa, dia matetika izy ireo no mahazo andian-tsarimihetsika mailaka tongasoa ao amin'ny boaty fidirana. Ny tanjona dia ny hanentanana azy ireo hividy vokatra iray. Toy izany koa, mahazo mailaka toy izany ireo prospect vaovao rehetra, ary indraindray tolotra fampiroboroboana kalitao. Amin'ny fampiharana ny famakafakana vinavina amin'ny angon-drakitra demografika sy ny fitondran-tena, dia azonao atao ny mizara ireo mpanjifa mety - mitsapa hafatra sy tolotra maro - mba hamoronana mailaka mampahafantatra, manan-danja ary manokana, manatsara ny fiovam-po, ary miteraka fidiram-bola.
Manangana fifandraisana amin'ny fihazonana ny mpanjifa - Ny famakafakana vinavina dia afaka mampiasa safidy fanolorana vokatra ho an'ny fandraisana anjara amin'ny mpanjifa, sy fitazonana. Ity angona ity dia afaka manampy anao hikendry ireo mpanjifa mety izay nividy ny vokatrao teo aloha na nijery azy ireo tao amin'ny tranokalanao. Manampy pitsopitsony isan-karazany toy ny taona, lahy sy vavy, sandan'ny kaomandy, toerana, sns. Azo atao ny mamantatra izay karazana vokatra tiany hovidina amin'ny ho avy. Miaraka amin'ity angon-drakitra ity dia mandefa atiny mailaka sy tolotra ho an'ny mpanjifa tsirairay ianao. Ny famakafakana vinavina dia ilaina ihany koa amin'ny famaritana ny impiry ny mpanjifa manao fividianana, azonao atao ny mahatakatra ny matetika tsara indrindra handefasana ny mailaka mifandraika amin'ny vokatrao amin'izy ireo.
Paikady fandresen-dahatra ny mpanjifa – Fandefasana a manina anao izahay hafatra amin'ny mailaka ho an'ny mpanjifa rehetra aorian'ny fe-potoana manokana hatramin'ny nividianany vokatra farany. Miaraka amin'ny fanampian'ny famakafakana vinavina, azonao atao ny mamorona mailaka fandresen-dahatra manokana, ary fantaro ny elanelam-potoana tsara indrindra handefasana mailaka amin'izy ireo, ary manolotra fihenam-bidy na famporisihana hampifandray azy ireo indray.
Ny varotra vinavina dia fitaovam-piadiana mahery vaika ho an'ny mpivarotra hahatakatra ny mpihaino kendrena ary hanampy azy ireo hampihatra paikady mahery vaika amin'ny fampielezan-kevitr'izy ireo amin'ny mailaka. Miaraka amin'izany, azonao atao ny mampiaiky ny mpanjifanao, ary manova azy ireo ho mpanjifa mahatoky, izay mitarika amin'ny fitomboan'ny varotra amin'ny farany.
Tags: fikasana hividychurntaham-panovanasandan'ny androm-piainan'ny mpanjifampanjifa winbackecommercemailakamailaka Marketingmpijery mitovy fijeryatiny manokanavinavina Analyticsmarketing mailaka mialohavarotra mialohatolo-kevitra momba ny vokatradaty fividiananafahazoana ny mpanjifafahazoana mpanjifachurn ny mpanjifa
Prasanna dia manam-pahaizana manokana momba ny SEO ao amin'ny Express Analytics. Manana traikefa amin'ny SEO, Media Sosialy, Bilaogy, Fitantanana laza an-tserasera, Google Ads ary YouTube Video Optimization.
Ahoana no fiasan'ny parametres UTM amin'ny mailaka miaraka amin'ny fampielezan-kevitra Google Analytics?
Torolàlana hahazoana mora ny backlinks sy laharana amin'ny Google amin'ny fampiasana AI